3. Na-anabata ihe nano-adiabatic, mmetụta nchekwa okpomọkụ dị mma, ịrị elu okpomọkụ nke mgbidi ọkụ na-erughị 25 ° C;
4. Na-anabata tube nchebe thermocouple na-abụghị metallic iji tụọ okpomọkụ nke mmiri mmiri aluminom ozugbo, njikwa okpomọkụ okpukpu abụọ, njikwa PID, nkwụsi ike okpomọkụ nke aluminum ≤ ± 2 ° C;
5. Na elu okpomọkụ aluminum mmiri, ala okpomọkụ mkpu, elu aluminum mkpumkpu mmiri na ndị ọzọ na-arụ ọrụ, na-eme ka ziri ezi mmejuputa iwu nke usoro;
6. Ụdị ihe owuwu ụlọ ọkụ pụrụ iche, belata ohere nkwụsị ọkụ na-enweghị isi, belata ọnwụ okpomọkụ na nke kacha nta;
7. Igwe mkpuchi ọkụ nwere ike ibuli elu pneumatic, ihicha slag na-adaba adaba na mmezi, ọkwa dị elu nke akpaaka.
A na-agụ anyị n'otu aha kachasị ntụkwasị obi nke na-arụ ọrụ n'ichepụta na ịnye ọkwa dị elu Nwuo oven nke a na-ejikarị eme ihe maka ọgwụgwọ okpomọkụ, ịhịa aka n'ahụ, kpo oku induction, agbaze na brazing. Ọkachamara anyị na-emepụta nso nso a na-enye site na iji akụrụngwa ọkwa kachasị elu yana teknụzụ kachasị ọhụrụ na-agbaso ụkpụrụ ahịa ahịa. Onye njikwa ogo anyị nwalere iji wepụta ntụpọ n'efu na njedebe ndị ahịa, anyị na-enye oven a na ọnụ ahịa asọmpi dị ukwuu.
Nke gara aga: Igwe ọkụ na-agbaze ọkụ eletrik
Osote: XGDR Eletrik kpo oku Rotary Igwe ọkụ okpukpu abụọ
Ndepụta nkọwapụta ọkụ na-ejide ọkụ eletrik
Nlereanya Njide ike
(kg) Ike eletrik kacha
(KW) Nkezi ọkụ eletrik
(mm) Elu nke ntinye ofe
Anyị nwere ike ịnye ụdị ọkụ ọkụ dị iche iche iji gboo mkpa mmepụta nke mmepụta ihe nkedo dị iche iche. Site na nnukwu ọkụ na-agbaze nke ọma ruo na ọkụ ọkụ na-agbaze dị mfe, na mgbakwunye ọkọlọtọ ọkọlọtọ, anyị na-enyekwa ọkụ omenala siri ike dị ka ihe ị chọrọ.
Igwe ọkụ na-ejide aluminum Alloy
Igwe ọkụ na-ejide aluminum
Zinc Alloy Holding Furnace
Igwe ọkụ na-ejide Zinc
CTM Series aluminum alloy agbaze na ijide f ...
XGDR Eletriki Heating Rotary Ugboro abụọ Crucible ...
JLQB Gas Aluminom Alloy na-etinye uche na-agbaze ...